३ करोड नेपालीको बेइज्जत गर्ने,भारतिय पत्रकार सुधिर चौधरी जे*लमा! Ramesh Prasai ft.Sudhir Chaudhary | Public 24Khabar
Home News ३ करोड नेपालीको बेइज्जत गर्ने,भारतिय पत्रकार सुधिर चौधरी जे*लमा! Ramesh Prasai ft.Sudhir...
३ करोड नेपालीको बेइज्जत गर्ने,भारतिय पत्रकार सुधिर चौधरी जे*लमा! Ramesh Prasai ft.Sudhir Chaudhary
माथिका जस्तै उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा प्रायः देख्न/सुन्न पाइराखिन्छन् । छोरो भएर पनि भान्साको काम गर्ने, छोरी भएर यति पनि नजान्ने, छोरी भएर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जाने … । यस्ता कुरा सुन्दा हाम्रा छोराछेरीले चाहिँ के सोच्दा हुन् ? मेरी साथी र छिमेकी आन्टीका कुरा सुनेको मेरो छोरालाई घरको काम गर्दा कस्तो अनुभूति होला ?
Previous articleकन्चनलाई भेट्न विराटनगरबाट सन्तोष सिधै आई*सियु कक्षमा, उपचारमा सहुलियत गरिदिन अस्प*ताल प्रमुखलाई अपिल
Next articleराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भर्खरै मुख खोले। भिडियो बाहिरियो गो*प्य योजनाहरु (भिडियो हेर्नुहोस्)